vision,mission,values – မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ် လီမိတက်
• ကွန်ယက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နံပါတ်(၁)နေရာတွင် ရှိနေပြီးယင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍမျိုးတွင် ဦးဆေင်မှုပေးနိုင်ကာတီထွင်မှု၊အဆင်ပြေလွယ်ကူမှု၊အရည်အသွေးတို့တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်။
• မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်သီးဝလံပန်းမန် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်တောင်သူလယ်သမားများ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကိုလည်း လျော့ချရန်။
သစ်သီးဝလံများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ပန်းမန်များနှင့်အခြားတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအစာ ထုတ်ကုန်များစသည့်လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဈေးကွက်တင်ခြင်းဗဟိုချက်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လွယ်ကူချောမောစေရေးအတွက် ခေတ်အမီဆုံးနှင့်အဆင့်အမြင့်ဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။
– ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ(ဈေးကွက်အသုံးပြုသူများ)၏လိုအပ်ချက်များက အရေးပါမှုနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တို့သည်အရေးပါကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။
– ဈေးကွက်အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလားအလာကောင်းပြီးကြီးထွားလာစေရန် ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက်ထိုသူများနှင့်အတူဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍(MAEX = Myanmar Agro Exchange Public Limited) ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
• ဝန်ထမ်းသည် ကုမ္ပဏီ၏တန်ဘိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
– လုံခြုံစိတ်ချရ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အလုပ်ဌာနနေရာတစ်ခု ဖြစ်စေပြီး
– ဝန်ထမ်းနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်သူများအကြားတွင်စည်းလုံးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖန်တီးပေးရန်နှင့်ပွင့်လင်း၊ရိုးသားစွာဆက်သွယ်၍ပြောင်းလဲမှုမရှိသောအရည် အသွေး ပြည့်ဝသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
– ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများကိုလေးလေးစားစားနှင့်ဂုဏ်သရေရှိရှိဆက်ဆံရန်နှင့် တန်းတူရည်တူရှိမှုနှင့်ကွဲပြားမှုတို့၏အခြေခံသဘောတရားများကိုတန်ဖိုးထားရန်။
– အလုပ်သမားများ၏တီထွင်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၏ တန်ဘိုးများတက်လာေစေရန်။
• အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ တန်ဖိုးထားမှု
– ကျွန်ုပ်တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏တန်ဘိုးထားမှုများကို မြှင့်တင်ရန်။
• To beanumber oneafresh food wholesale market and supply chain company in Myanmar for its industry leadership and commitment to innovation, convenience, quality and excellence.
• To develop Myanmar Agriculture and Horticulture industry as well as to alleviate poverty of farmers, growers and sellers.
• To provideastate of the art infrastructure and services to facilitate the development and operation of the world class distribution and marketing hub for fresh produce such as fruits, vegetables and flowers and other value added food products.
– To recognize the importance of our customers (market users) needs and common goals to the success of our business.
– To work in consultation with market users to manage MAEX assets, to meet their needs and to support their business viability and growth.
• EMPLOYEE AS COMPANY’S ASSET
– To provideasafe and healthy workplace and comply to international standard.
– To createacohesive collaboration amongst the employees and management, communicate openly, honestly and provideaconsistent quality of service.
– To treat our employees with respect and dignity, value the principles of equality and diversity.
– To encourage employees’ innovation so that it can add value to businesses.
To conduct our business efficiently and orderly to maximize our shareholders values.